နံနက် အိပ်ရာထ မျက်နှာသစ်နေစဉ် ကုသိုလ် ၅ မျိုး ကို ရအောင်ယူနည်း – Pwintsan
မနက်အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ဆိုရင် ရေဖလား ထဲကို ရေထည့် လိုက်ပါ။ မျက်စိ နဲ့ မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်သို့ မမြှောက်လိုက် ပါနဲ့ မေတ္တာပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာ စိုးလို့ပါ။
လက်ကကိုင် ထားတဲ့ ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရားအား မျက်နှာ သစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ ၏ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သော အားဖြင့် မျက်နှာ သစ်တော်မူ ပါဘုရား” လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ကြည်လင်နေတဲ့ ရေကိုကြည့်ပြီး ဤရေ အေးမြကြည်လင် သလို အဖေနဲ့ အမေ စိတ်ရောရုပ်ပါ အေးမြပါစေ။ ဤရေ အေးမြသလို ငါ့ရဲ့အလုပ်ရှင် စိတ်ရောရုပ်ပါ အေးမြပါစေ။
ဤရေ အေးမြသလို ငါ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စိတ်ရော ရုပ်ပါ အေးမြကြပါစေ။ ဤရေ အေးမြ သလို သတ္တဝါအားလုံး စိတ်ရောရုပ်ပါ အေးမြကြပါစေ… လို့ မေတ္တာပို့လိုက်ပါ။
ဒါဆို မေတ္တာကုသိုလ် ဖြစ်သွား ပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ရေဖလား ကို အပေါ်မမြှောက်ပါနဲ့လို့ ပြောတာပါ။ အပေါ်မြှောက်ထားရင် မေတ္တာပို့ ရတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ရေကိုမြင်တဲ့နေရာမှာ ရေဖလား ကိုထားပြီး မေတ္တာပို့ရတာက ပိုအဆင်ပြေလို့ပါ။
ပြီးရင် ငါဒီတစ်ညတော့ အသက်ရှင် ခဲ့ပြီး ဝင်လေမဆုံးခင် ထွက်လေ မဆုံးခင် နံနက်၊ နေ့ည အချိန်မရွေး သေသွားနိုင်သည်… လို့ မရဏာနုသာတိ ပွါး လိုက်ပါ။ ဒါဆို မရဏာနုသာတိ ကုသိုလ် ဖြစ်သွားပါပြီ။
မျက်စိအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ နှာခေါင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ ပါးစပ်မှာရှိနေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ ကို အာရုံပြုပြီး ငါ့ရဲ့ မျက်နှာဟာ စက်ဆုပ် ရွံရှာဖွယ် ပါတကား…. လို့ အသုဘ ဘာဝနာ ပွါးလိုက်ပါ။
ဒါဆို အသုဘဘာဝနာ ကုသိုလ် ဖြစ်သွားပါပြီး အသုဘ ဘာဝနာ ပွါးရတာ အိပ်ယာထဆိုတော့ အသုဘရဲ့ လက္ခဏာတွေ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိနေတဲ့အတွက် ပွါးရတာ ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာ ရှိပါသေးတယ်။
အသုဘပွါးတာ မနက်စောစောက အဆင်ပြေ ဆုံးပါပဲ။ အားလုံးပြီးမှ မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာတော်သစ်ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးအဖြစ် ပြန်စွန့်တော်မူ ပါဘုရား လို့ စွန့်ပြီး မျက်နှာသစ် လိုက်ပါ ဒါဆို မျက်နှာသစ်ရင် ကုသိုလ်(၅)မျိုး ရ သွားပါပြီ။
မနကျအိပျယာထ မကျြနှာသဈတော့မယျ ဆိုရငျ ရဖေလား ထဲကို ရထေညျ့ လိုကျပါ။ မကျြစိ နဲ့ မွငျသာမယျ့ ရငျခေါငျးလောကျမှာ ရဖေလားကို ကိုငျထားပါ။ ရဖေလားကို အပျေါသို့ မမွှောကျလိုကျ ပါနဲ့ မတ်ေတာပို့တဲ့အခါ အဆငျမပွမှော စိုးလို့ပါ။
လကျကကိုငျ ထားတဲ့ ရဖေလားနဲ့ ” မွတျစှာဘုရားအား မကျြနှာ သဈတျောရေ ကပျလှူပါ ၏ဘုရား ဘုရားတပညျ့တျောကို သနားခြီးမွှောကျသော အားဖွငျ့ မကျြနှာ သဈတျောမူ ပါဘုရား” လို့ဆိုပွီး ကပျလိုကျပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလျ ဖွဈသှားပါပွီ။
အရဟံ – ကိလသော မွူမှုနျပငျ ကငျးစငျတျောမူသော မွတျစှာဘုရား အရဟံ – ပူဇျောအထူးကို အထူးခံယူတျောမူထိုကျသော မွတျစှာဘုရား အရဟံ – ဆိတျကှယျရာ အရပျမှာပငျ မကောငျးမှုကို မပွုတျောမူသောမွတျစှာဘုရား ဒါဆို ဗုဒ်ဓနုသာတိ ကုသိုလျဖွဈသှားပါပွီ။
ကွညျလငျနတေဲ့ ရကေိုကွညျ့ပွီး ဤရေ အေးမွကွညျလငျ သလို အဖနေဲ့ အမေ စိတျရောရုပျပါ အေးမွပါစေ။ ဤရေ အေးမွသလို ငါ့ရဲ့အလုပျရှငျ စိတျရောရုပျပါ အေးမွပါစေ။
ဤရေ အေးမွသလို ငါ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ စိတျရော ရုပျပါ အေးမွကွပါစေ။ ဤရေ အေးမွ သလို သတ်တဝါအားလုံး စိတျရောရုပျပါ အေးမွကွပါစေ… လို့ မတ်ေတာပို့လိုကျပါ။
ဒါဆို မတ်ေတာကုသိုလျ ဖွဈသှား ပါပွီ။ ဒါ့ကွောငျ့ ရဖေလား ကို အပျေါမမွှောကျပါနဲ့လို့ ပွောတာပါ။ အပျေါမွှောကျထားရငျ မတ်ေတာပို့ ရတာ အဆငျမပွပေါဘူး။ ရကေိုမွငျတဲ့နရောမှာ ရဖေလား ကိုထားပွီး မတ်ေတာပို့ရတာက ပိုအဆငျပွလေို့ပါ။
ပွီးရငျ ငါဒီတဈညတော့ အသကျရှငျ ခဲ့ပွီး ဝငျလမေဆုံးခငျ ထှကျလေ မဆုံးခငျ နံနကျ၊ နညေ့ အခြိနျမရှေး သသှေားနိုငျသညျ… လို့ မရဏာနုသာတိ ပှါး လိုကျပါ။ ဒါဆို မရဏာနုသာတိ ကုသိုလျ ဖွဈသှားပါပွီ။
မကျြစိအတှငျးမှာ ရှိနတေဲ့ အညဈအကွေးတှေ၊ နှာခေါငျးမှာ ရှိနတေဲ့ အညဈအကွေးတှေ၊ ပါးစပျမှာရှိနတေဲ့ အညဈအကွေးတှေ ကို အာရုံပွုပွီး ငါ့ရဲ့ မကျြနှာဟာ စကျဆုပျ ရှံရှာဖှယျ ပါတကား…. လို့ အသုဘ ဘာဝနာ ပှါးလိုကျပါ။
ဒါဆို အသုဘဘာဝနာ ကုသိုလျ ဖွဈသှားပါပွီး အသုဘ ဘာဝနာ ပှါးရတာ အိပျယာထဆိုတော့ အသုဘရဲ့ လက်ခဏာတှေ ထငျထငျရှားရှား ရှိနတေဲ့အတှကျ ပှါးရတာ ပိုပွီး ထငျသာမွငျသာ ရှိပါသေးတယျ။
အပွငျသှားခါနီး ဖီးလိမျး ပွငျဆငျပွီးတဲ့အခါ လှလှပပ ဝတျဆငျ ထားတဲ့အခါ အသုဘပှါးရတာ အဆငျမပွလှေပါဘူး။ မိတျကပျတှေ အဝတျတှနေဲ့ ဖုံးထားတဲ့ အတှကျ အသုဘ လက်ခဏာတှကေ မပျေါပါဘူး။
အသုဘပှါးတာ မနကျစောစောက အဆငျပွေ ဆုံးပါပဲ။ အားလုံးပွီးမှ မွတျစှာဘုရား မကျြနှာတျောသဈပွီးပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဆေးအဖွဈ ပွနျစှနျ့တျောမူ ပါဘုရား လို့ စှနျ့ပွီး မကျြနှာသဈ လိုကျပါ ဒါဆို မကျြနှာသဈရငျ ကုသိုလျ(၅)မြိုး ရ သှားပါပွီ။